Zinabantu bazo iziteshi ezikwi-internet | Isolezwe
Zinabantu bazo iziteshi ezikwi-internet
ezemisakazo / 9 May 2017, 10:22am / FANELESIBONGE BENGU
OBENGUMSAKAZI weMetro FM uGlen Lewis osesakaza esiteshini sikaTbo Touch, iTouch HD
KULEZI zinsuku uma kukhulunywa ngemisakazo ingxoxo ayipheli ingangenanga eyeziteshi ezisakaza nge-internet.
Lokhu kungenxa yokuthi uGareth Cliff washiya i-5 FM wasungula isiteshi sakhe iCliff Central. Kodwa okwenze kwakhulunywa kakhulu ngalezi ziteshi wukusungulwa kweTouch Central nguTbo Touch owashiya iMetro FM noCliff. Kuyimanje uTbo Touch usezimele yedwa futhi umsakazo wakhe usuwaziwa ngeTouch HD.
Ngeledlule kuphinde kwazalwa omunye umsakazo iMassiv Metro kaDJ Sbu. Okwenza abantu bakhulume kakhulu ngale misakazo wukuthi igabe ngosaziwayo nabasakazi abanohlonze.
Buka nje uTouch uphethe uGlen Lewis owayeyisilomo seMetro FM, Thembisa Mdoda nabanye kanti ngakolunye uhlangothi uSbu yena uphethe oThembi Seete, Celeste Ntuli, Zola nabanye.
Kunabaningi abangaqondi ukuthi le misakazo isebenza kanjani nanokuthi izophumelela yini.
NoShakes Ngema owayesakaza kwiZululand FM nakwiNqubeko FM waziqalela isiteshi sakhe esisakaza ku-Instagram.
Okukhalisa abantu wukuthi njengoba isakaza nge-internet nje, kumele kusebenze i-data okuyinto ebizayo.
Engifuna ukukusho wukuthi akumele siyibuke ngokuthi ngoba thina i-data kuyasehlula ukuyithenga bese sicabanga ukuthi le misakazo ngeke isebenze. Kusobala ukuthi ayisakazeli thina ngoba kunabantu abangaxakekile.
Ngokwezibalo zeBroadcasting Research Council of South Afrika ebheka ukulalelwa kwemisakazo, bakhona abantu abalalela umsakazo nge-internet. Okusahamba phambili nokho wukulalela emsakazweni kuze abawulalela kumaselula. Ukhumbule futhi ukuthi le misakazo inama-application afakwa kumaselula bese uyakwazi ukulalela uphinde ukhethe ukuthi umsindo ufuna ukuzwa usezingeni eliphansi noma eliphezulu. Uma ukhetha ukuthi uwuzwe usezingeni eliphansi ne-data ayihambi kakhulu kodwa ezingeni eliphezulu iyadla kakhulu.
Kumele sikhumbule ukuthi njengoba le misakazo isakazela intsha nje kakhulu, intsha isemanyuvesi lapho kukhona i-internet yamahhala. Iphinde ihambele nezindawo njengezokudla lapho kutholakala khona i-internet yamahhala.
Okuyinkinga nokho wukuthi kusazothatha isikhathi ukuze incintisane nemisakazo ongakwazi ukuyilalela kwiFM ngoba yona itholwa abantu abaningi kodwa le ngeyabantu abathize kuphela. Yingakho uzwa eTouch HD bethi bafuna ukuzama ukusifaka kwiDStv isiteshi sabo.
Abasakazi bakhona behlelwa udumo ngenxa yokuthi balalelwa yingcosana yabantu abakwazi ukuthenga idata.